Tips to Improve Your Work Performance (Part-2) ﻿
Tips to Improve Your Work Performance (Part-2)
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင်လုပ် ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များ (အပိုင်း-၂)
၆။ အာရုံစူးစိုက်မှုမပျက်ပါစေနဲ့ (အနှောင့်အယှက်များကို ကြိုတင်ဖယ်ထုတ်ထားပါ)
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနှောင့်အယှက်များ (သို့) အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပျက်စီးစေသည့်အရာများဟာ ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့တစ်နေ့တာအတွင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်နှောင့်ယှက်ခံရပြီး ဘယ်သူ တွေကသင့်ကိုလာရောက်နှောင့်ယှက်မှုအပြုဆုံးလဲဆိုတာက အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကအနှောင့်အယှက်များကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည်တိုးတက်အောင် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။ သင်မှတ်ထားဖို့က လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကအနှောင့်အယှက်များဟာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ပြီး အချိန်များအကျိုးမဲ့ကုန်ဆုံးစေကာ သင့်ရဲ့အလုပ်အစီအစဉ်များကိုအနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး လုပ်ငန်းပရောဂျက်များဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက အနှောင့်အယှက်များနဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုပျက်စေတဲ့အရာများကိုရှောင် လွှဲလိုပါက သင့်ရဲ့ဖုန်း (သို့) email တို့ကို မသုံးမိစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Notification များကိုပိတ်ထားပြီး ရှိနေတဲ့လုပ်စရာများကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်မှုရှိစေဖို့ကိုသာ အာရုံစိုက်ထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်ပါက ငြင်းဆန်တတ်ဖို့ကိုလည်းလေ့လာသင်ယူထားပါ။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ဘယ်လိုအရာမျိုးမဆို (သို့) ဘယ်သူ့ကိုမဆိုငြင်းနိုင်သလို၊ ငြင်းလဲ ငြင်းဆို သင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအပြင်အောက်ပါလွယ်ကူတဲ့အမူအကျင့်များဟာ သင့်ကိုအလုပ်လုပ်စဉ်မှာ အာရုံစူး စိုက်မှုရှိနေစေဖို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။
• အလုပ်ချိန်အတွင်း (smartphone များ၊ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများ၊ ရုံးတွင်းစကားစမြည်ပြောဆို မှုများနဲ့ အခြားသောအရာများ) ကိုမလုပ်မိပါစေနဲ့။
• အလုပ်ချိန်အတွင်းတိုတောင်းတဲ့အနားယူပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါ - သင်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းတစ် ပုဒ်ကိုနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခနလောက်လမ်းလျှောက်ပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်။
၇။ သင့်ရဲ့အားသာချက်များနဲ့ အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း
အရာရာမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ တစ်ကယ်တမ်းတွင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ အရာ တိုင်းမှာ perfect ဖြစ်နေဖို့မှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာ အားနည်းချက်များရှိနေပြီး ဒီအရာ များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီပိုမိုတိုးတက်မှုရှိလာစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေဖော် ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ့အပြင် လူတိုင်းတွင် သူ/သူမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားသာချက်များ (သူတို့အနေနဲ့ တော်တဲ့နေရာများ) လည်းရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ခွင်မှာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက် သင့်ရဲ့အားသာချက်များကိုတန်ဖိုးထားပြီး သင့် ရဲ့အားနည်းချက်များကိုလည်းလျော့နည်းလာစေရန်အတွက် အချိန်နဲ့တပြေးညီပြုလုပ်ပေးသွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အလွန်ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို သင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလုပ်ဆောင် နိုင်ရုံနဲ့ ကျေနပ်မနေပါနဲ့။ သင့်ကိုယ်သင်ဝေဖန်ပြီး သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်စေမယ့်အရာများကို အမြဲမပြတ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုပြုပေးရပါမယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ရာကိုလုပ် ဆောင်ရာတွင် အလွန်တော်ပါက သင့်အနေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်ဘယ်အရာကိုမဆို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင် ပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်များကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရ မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါနည်းလမ်းများကတော့ သင့်အနေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါ တယ်။
• သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တွင် ပုံမှန်ဖြစ်နေကျအရာများကိုရှာဖွေပါ
• အလုပ်လုပ်စဉ်အတွင်း သင့်အနေနဲ့ဘယ်အရာကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
• မိမိရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Reflective Best Self (RBS) လေ့ကျင့်မှု များကိုလုပ်ဆောင်ပြီး အခြားသူများရဲ့ သင့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြည့်ပါ။
• သင့်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့၊ တွေးတောဖို့နဲ့ အတွေးအမြင်များကိုလိုအပ်တဲ့အခြေအနေများတွင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမှတ်သားထားပါ။
၈။ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာများကိုသိပါ (သင့်ရဲ့ limit ကိုသိပါ)
မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာများကို အစဉ်အမြဲပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆောင် ရွက်နိုင်စေမည့်နည်းလမ်းများကိုအစဉ်အမြဲရှာဖွေနေခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်သော်လည်း သင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကိစ္စရပ်များစွာ ကိုတစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့) အီလေးဆွဲခြင်းများမဖြစ်ပါစေနဲ့ တစ်ကြိမ်တွင်အလုပ်တစ်ခုကို သာပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပြီး သင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းအပေါ်တွင် စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးစေရန်နဲ့ အမှား နည်းပြီး ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ခြင်းနည်းပါးအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ အရာရာတိုင်းကို သင့်ရဲ့ ခေါင်းထဲတွင်ရှင်းလင်းစွာတွေးတောနိုင်စေခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာထင်ထားတာထက်ပိုပြီးအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်အောင်နဲ့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်ပြုလုပ်ရခြင်းဟာ လွယ်ကူတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ ထိုအရာများထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှုမပြုသရွေ့ ဒီအရာကို သင်ဘယ်တော့မှ နားလည် မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် သင့်အနေနဲ့ အလုပ်ခွင်အတွင်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းခြင်းနဲ့ အလုပ်ခွင်အတွင်းစိတ်ဖိစီးနေခြင်းတို့အကြားမှာ စည်းသတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသို့ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာလဲ? အောက်ပါအချက်များကတော့ သင့်အနေနဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အချက်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• ပြဿနာမဖြစ်စေပဲ ငြင်းဆိုတတ်ပါစေ။
• ကိစ္စရပ်များဟာ လွန်စွာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါများတွင်နောက်ဆုတ်ပါ။
• အရမ်းမျှော်မှန်းချက်တွေမကြီးပါနဲ့၊ လက်တွေ့ဆန်ပါ။
• သင့်အနေနဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အလုပ်တာဝန်ပမာဏကိုရှာဖွေပြီး ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း မဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားပါ။
၉။ သင်စခဲ့တဲ့အရာများကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါစေ
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ကိစ္စရပ် များကိုပြီးဆုံးအောင် မလုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကိုစတင်လုပ်ဆောင် ပြီးနောက် မကြာမှီတွင် ထိုအရာကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ပဲ စွန့်လွှတ်လိုက်တာမျိုး ဘယ်နှစ်ကြိမ် လုပ်ဖူးတာကိုမှတ်မိပါသလဲ? အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးမကြာခဏလုပ်မိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပါပြီ။ ကိစ္စရပ်များကို တဝက်တပျက်ထားခဲ့တတ်ခြင်းကို အကျင့်ကြီးတစ်ခုမဖြစ်ပါ စေနဲ့။ အကယ်၍သင်ဟာ လုပ်ငန်းပရောဂျက်တစ်ခု (သို့) လုပ်စရာကိစ္စတစ်ခုခုကို စတင်လုပ်ဆောင် လိုက်ပြီဆိုရင် အကောင်းဆုံးသောအရည်အသွေးနဲ့ အဆုံးသတ်အထိသေချာစွာလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
သင့်ကိုယ်သင်ဆုချရန်သတ်မှတ်ထားပါ။ အောင်မြင်မှုများရရှိတဲ့အခါမှာ အောင်ပွဲခံတတ်ဖို့နဲ့ သင့်ကိုယ် သင်ဆုချတတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုကိုမွေးမြူထားပါ။ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းပရောဂျက်တစ်ခု (သို့) လုပ်စရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါက ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းအား ဖြင့် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီး သင့်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ မျှော်လင့်နိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သင့်အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင် ရည်များဟာသိသိသာသာကိုတိုးတက်မှုရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောလုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ သုတေသနပြုမှုများနဲ့ လေ့လာမှုများအရ အဖွဲ့အစည်း/ လုပ်ငန်းအများစုဟာ cloud ကိုအခြေခံ ထားတဲ့ tool တွေနဲ့ နည်းပညာများကို သူတို့ထံမှရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ပိုမိုအသုံးချလာ ကြတာကိုပြသနေပါတယ်။ လာမည့်နှစ်များတွင် IT နည်းပညာများဟာ ခေတ်ပေါ်လုပ်ငန်းများအတွက် နည်းဗျူဟာကျကျအလုပ်လုပ်နိုင်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားကြပြီး အဖွဲ့ အစည်း/ လုပ်ငန်းများရဲ့ ၈၁% ဟာလည်း အထက်ပါပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ team ကို နောက်ဆုံးပေါ် အထောက်အကူပစ္စည်းများနဲ့ နည်းပညာများနဲ့ အမြဲတမ်း ခေတ်မှီနေစေရန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဈေးကွက်အတွင်းရှိနေတဲ့ရွေးချယ်စရာများထဲကမှ အကောင်းဆုံးနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာကိုရှာဖွေအသုံးပြုပါ။ လုပ်ငန်းပရောဂျက်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လွယ်ကူစေမည့်၊ ရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည့်၊ အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင် ပြီး သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုအစဉ်အမြဲမြင့်မားစေနိုင်မည့် Cloud အပေါ်အခြေခံထားသော project management software များကိုရှာဖွေအသုံးပြုလိုက်ပါ။